I-Bitcoin Cash Archives-Funda ukurhweba
tag: I-Bitcoin Cash
I-Bitcoin Cash (BCH) ikwiNdlela esecaleni, ilwa nokuchasa nge-600 yeedola.
I-BCH inamathele ngaphantsi kwe-600 yeedola
I-BCH ikwakwindlela esecaleni
Ixabiso langoku: $ 588.52
Intengo yeNtengiso: $ 12,374,442,289
Umthamo wokuThengisa: $ 12,374,442,289
Bitcoin Cash (BCH) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoNovemba 1, 2021
I-Bitcoin Cash (BCH) ithengisa kwisilungiso esisezantsi ngaphantsi kwe-$ 600 yokuchasana. Ukususela ngo-Oktobha 28, ixabiso le-BCH liguquguquka ngaphantsi kwinqanaba lokumelana. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziphula i-$ 600 yokuchasana, i-BCH iya kukhwela i-$ 680. Nangona kunjalo, abathengi kuya kufuneka balwe nokuchasana okuncinci kwi-650 yeedola. Kwi-uptrend yangaphambili, i-BCH yachaswa kwi-650 yeedola eziphezulu.
Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwe-50-day SMA kodwa ngaphantsi kwe-21-day SMA ebonisa ukuhamba ecaleni. I-BCH ikwinqanaba le-48 yexesha le-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba i-BCH ikwindawo ephantsi kwe-downtrend kwaye ingaphantsi kwe-centerline 50. Oko kukuthi, imarike iyancipha ukuhla. I-cryptocurrency ikwisantya esiphezulu njengoko i-BCH ingaphezulu koluhlu lwe-50% yestochastic yemihla ngemihla.
Kwitshathi yeyure eyi-1, i-BCH ikwintshukumo esecaleni. Ixabiso liyaguquguquka kwaye liphinda livavanye izinga lokumelana. Okwangoku, ngoNovemba 1 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-38.2% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-BCH iya kunyuka kwinqanaba le-2.618 i-Fibonacci extensions okanye inqanaba le-$ 627. 33 .
I-BCH / USD-1 Itshathi yeYure
tags BCH. BCH / iUSD, I-Bitcoin Cash, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Bitcoin Cash (BCH) Ifumana inkxaso ngaphezu kwe-$ 610, iqala kwakhona i-Uptrend
BCH ijongene nokwaliwa kwi $ 650
I-BCH ikhupha uxinzelelo lokuthengisa, ifumana inkxaso ngaphezu kwe-$ 610
Ixabiso langoku: $ 621.97
Intengo yeNtengiso: $ 13,061,124,032
Umthamo wokuThengisa: $ 1,141,288,446
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Okthobha 25, 2021
Ukusukela nge-16 ka-Okthobha, I-Bitcoin Cash (BCH) uptrend uye wajongana nokwaliwa kwi-650 yeedola eziphezulu. Ngo-Oktobha 16 kunye ne-20, abathengi bagxothwa njengoko imarike inqabile ukuya kwi-$ 610 ephantsi. Namhlanje, ixabiso le-BCH lizama ukulungisa phezulu njengoko lijongene nokukhatywa kwi-50-day SMA. Okwangoku, i-altcoin ithengisa kwi-621 yeedola ngexesha lokubhala. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqalise ukuba ixabiso liqhekeza ngaphantsi kwe-$ 600 inkxaso.
I-BCH ikwinqanaba le-54 yexesha le-Relative Strength Index 14. Ibonisa ukuba i-crypto ikwindawo ephakamileyo kunye nangaphezulu kwe-centerline 50. Kwakhona iyakwazi ukunyuka phezulu. I-altcoin ine-bearish crossover. Oko kukuthi, i-50-day SMA iwela ngaphantsi kwe-21-day SMA ebonisa uphawu lokuthengisa. Kwakhona, uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqalise ukuba ixabiso liyaphuka kwaye livale ngaphantsi komgca wenkxaso.
Kwi-1 - itshathi yeyure, i-BCH iye yahamba phantsi. I-downtrend iyancipha njengoko i-cryptocurrency ifumana inkxaso ngaphezu kwe-610 yeedola. Okwangoku, ngo-Oktobha 21 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye inqanaba le-61.8% lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-BCH iya kuwela kwinqanaba le-1.618 i-Fibonacci extensions okanye inqanaba le-$ 599.54. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-BCH yawela kwi-$ 605 .16 ephantsi kwaye iphinda iqalise i-uptrend.
I-Bitcoin Cash (BCH) isekuHambiseni ezantsi, ngoMeyi iyehla iye kuthi ga kwi-558 yeedola
Ubuso be-BCH buyaliwa kwinqanaba le-650 yeedola
I-BCH inokuhla iye kwi-558 yeedola
Ixabiso langoku: $ 600.68
Intengo yeNtengiso: $ 12,616,674,493
Umthamo wokuThengisa: $ 1,245,341,326
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Okthobha 18, 2021
Kule veki iphelileyo, I-Bitcoin Cash (BCH) sele ithengisa kwindawo yokuqhubela phambili. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwindawo ephezulu ye- $ 648 njengoko i-altcoin iyehla. Ukuba amaxabiso aqhekeza ngaphantsi kwe-50-day SMA, iya kukhawulezisa uxinzelelo lokuthengisa kwicala elisezantsi. I-BCH iya kwehla iye kuthi ga kwi-550 yeedola. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso yeentsuku ezingama-50 ibambe, i-BCH iya kuphinda iqale ngokutsha.
I-imali yedatha ikwinqanaba lama-52 leNdawo yamaXabiso aMandla aHlanganisiweyo ixesha le-14.Ibonisa ukuba i-crypto isendaweni ye-uptrend kwaye ingaphezulu komgangatho osembindini wama-50. ye stochastic yemihla ngemihla. Ingqekembe ikwimeko ye-bearish.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BCH inyukela phezulu. I-uptrend ijongene nokwaliwa kwindawo yokumelana ne- $ 650. Iyancipha ukuya kwi-605 yeedola ezisezantsi kwaye iphinde iqale ukulungiswa ngaphezulu. Ukulungiswa okuphezulu kuyekisiwe kwi-620 yeedola ephezulu njengoko iibhere ziphinde zaqala ukuthengisa uxinzelelo. Okwangoku, ngo-Okthobha u-17 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH iya kuwela kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba le- $ 558.34.
I-Bitcoin Cash (BCH) iXakekile ingaphantsi kweedola ezingama-600, inokuphinda ithengise uxinzelelo
Ukulwa kwe-BCH kwi-600 yeedola
I-BCH inokuphinda iqale ngokuthengisa uxinzelelo
Ixabiso langoku: $ 602.98
Intengo yeNtengiso: $ 12,662,412,572
Umthamo wokuThengisa: $ 1,209,902,232
Utshintsho lwexabiso le Bitcoin Cash (BCH) ngo-Okthobha 11, 2021
I-Bitcoin Cash (BCH) kukunyuka okuphezulu. I-altcoin ingaphezulu komgca weentsuku ezingama-21 ze-SMA kodwa ingezantsi komgca weentsuku ezingama-50 ze-SMA. Kwiintsuku ezintlanu ezidlulileyo, abathengi bebetsala nzima ukophula ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne- $ 600. Ukuba ukuchasana okwangoku kuphuliwe, kuya kubonisa ukuqala kwakhona kwe-uptrend. I-BCH / i-USD iya kuphinda iqale ngokulungiswa ezantsi ukuba abathengi bayasilela ukophula inqanaba lokuxhathisa elikhoyo.
I-BCH ikwinqanaba lama-54 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-crypto isendaweni ye-uptrend kwaye ingaphezulu kwe-centerline ye-50. I-BCH ingaphezulu kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ingqekembe ikwisantya esiphezulu.
I-BCH inyukele phezulu. Nge-6 ka-Okthobha, i-uptrend yafikelela kwinqanaba eliphezulu le-625 yeedola kodwa yafikelela ekudinweni okuphezulu ngaphezulu kwe-600 yeedola. I-BCH / i-USD yanyanzelwa ukuba iphinde iqhubeke ngendlela esecaleni kwinqanaba lokumelana. Ngeli xesha, ngo-Okthobha u-6 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-BCH inokuthi inyuke kodwa ibuye umva kwinqanaba le-1.272 yeFibonacci eyandisiweyo okanye inqanaba leedola ezingama-676.54.